Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo Loodiyaar Garoobay. | ogaden24
Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo Loodiyaar Garoobay.
Kadib todobaadyo buuq iyo xiisad siyaasadeed oo keenay in uu xilka ka dago gudoomiyhii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Pro. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa waxaa baarlamaanka Soomaaliya ay iska dhex doorteen 15 xubnood oo ah guddiga doorashada ee gudoomiyaha baarlmaanka cusub.
Waxey arintaan ku soo beegmaysaa iyadoo wali laga dareemayo xubnaha baarlmaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay’adda fulinta ee xukuumada uga madax banaanan karto. Abaabul iyo tartan culus ayaa ka dhex socda golaha shacabka dhexdiisa.
Musharixiin badan oo qaarkood ay xilal ka hayaan dawlada Soomaaliya ayaa codsigooda soo gudbiyay. Magacaabista Gudiga Doorashada ayaa lagu fasiray inay tahay talaabo horay loo qaaday si looga gudbo khilaafkii iyo dhibaatadii sayaasadeed oo xubnaha baarlamaanka soo kala dhex gashay mudadii lasoo dhaafay.